महिलाले स्तन देखाए सजाय दिने १५ देश को-को ? हेर्नुहोस् - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
महिलाले स्तन देखाए सजाय दिने १५ देश को-को ? हेर्नुहोस्
समाजमा बिना कपडा हिन्न पाउने मागका साथ विभिन्न राष्ट्रहरुमा महिलाकर्मीहरुले क्याम्पिन नै चलाउने गर्छन् । तर, विश्वमा केही यस्ता राष्ट्रहरु रहेका छन् जहाँ स्तन देखाएमा कडा सजायको भागिदार हुनुपर्छ । महिला पक्षमा कानुन नभएको भन्दै बेलाबेला यस्ता देशहरुमा आन्दोलन समेत हुने गरेको छ । आउनुहोस् हेरौ महिलाले सार्वजनिक स्थलमा स्तन देखाएमा कस्ताकस्ता सजाय दिइन्छ यी देशहरुमा-
७ माल्टा माल्टामा सार्वजनिक स्थलमा बक्षस्थल देखाएमा जरिवाना वा जेल सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।